कडा चिसोले तपाइँको फोनलाई पनि असर गर्छ, कसरी बचाउने जान्नुहोस् ? « गोर्खा आवाज
कडा चिसोले तपाइँको फोनलाई पनि असर गर्छ, कसरी बचाउने जान्नुहोस् ?
११ पुस २०७७, शनिबार ००:००
काठमाण्डौँ । डिसेम्बरको महीना करिब करिब आधा सकिसकेको छ र यहि महिनालाई वर्षकै सबैभन्दा चिसो महिनाको रुपमा लिने गरिन्छ। यो समय मौसम विज्ञहरूले पनि यो प्रष्ट पारिसकेका छन् कि यो वर्षको समय एकदम चिसो हुनेछ। यस मौसममा स्वास्थ्यको साथसाथ तपाईंले आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ग्याजेट अर्थात् स्मार्टफोनको पनि अधिक ध्यान राख्नु पर्नेछ ।
वास्तवमा, स्मार्टफोनको ब्याट्री चिसो मौसममा अधिक छिटो सकिने समस्या हुन्छ। यसका साथै स्क्रिनमा पनि पटक पटक धमिलिने हुन्छ । सामान्यतया तपाईको फोन राम्रोसँग काम गर्दछ जबसम्म तापमान शुन्य डिग्री सेल्सियसको नजीक हुन्छ।
तर जब तापक्रम माइनासमा जान्छ त्यसको पहिलो प्रभाव स्मार्टफोनको ब्याट्रीमा देखिन्छ। तापक्रम घट्ने बित्तिकै फोनको ब्याट्री ड्रप हुन थाल्छ। यदि तपाईं पनि हिउँ पर्ने मौसममा हुनुहुन्छ भने केही सुझावहरू अनुसरण गर्दा फोनको ब्याट्री चाँडै नै सकिनबाट बचाउन सकिन्छ।
यसरी फोनको सुरक्षा गर्नुहोस्
फोनलाई अत्यधिक चिसोबाट जोगाउन, चिसो मौसमको समयमा खुलास्थानमा फोन नराख्नुहोस्।
फोनलाई न्यानो ज्याकेटमा राख्ने प्रयास गर्नुहोस्।
फोनलाई राम्रो कभरमा राख्नुहोस्, ताकि फोनको तापक्रम सहि होस्।
यदि तपाईं आपतकालको बेलामा लामो आउटगोइङ्ग कल गर्दै हुनुहुन्छ भने, फोनलाई पावर बैंकमा जडान गर्नुहोस्।
एलसिडी स्क्रिन भएका स्मार्टफोनहरूमा चिसोका कारणले स्क्रिनमा समस्याहरू निम्त्याउँछन्। जब तापक्रम तल झर्छ, फोनको स्क्रिनमा ब्लर हुन्छ। यस कारण, फोनमा देखिने टेक्स्ट र तस्वीर पनि धमिलो देखिन्छ। विज्ञहरू भन्छन कि जाडोमा फोन सकेसम्म गोजीमा राख्नु पर्छ।यसका साथै फोनलाई राम्रो केसको साथ प्रयोग गरेर पनि यो समस्याबाट पार गर्न सकिन्छ।
किन ब्याट्री छिटो डिस्चार्ज हुन्छ
विज्ञहरू भन्छन कि लिथियम आयन ब्याट्री धेरै फोनमा प्रयोग गरिन्छ। तापक्रम घट्दा तिनीहरूको आन्तरिक विद्युतीय प्रतिरोध बढ्छ। यसका कारण ब्याट्री क्षमता घट्छ र ब्याट्री चाँडै डिस्चार्ज हुन थाल्छ।